China Kucheka Mat ye Silhouette, 8824, 12 ″ x24 ″ kucheka bonde re Silhouette cameo Kugadzira uye Fekitori | Allwin
Shanda zvakanakira Silhouette Cameo4 / 3/2 / 1 yekupedzisira DIY yemagetsi yekucheka chishina muchina
Yakasimba yekubata yekunamatira yekucheka bonde yakave yakagadzirirwa kwechiedza uremu zvinhu, yakakurudzirwa zvinhu zveakakora kadistock, inopenya kadistock, magineti zvinhu, poster bhodhi, machira ane stiffener.
Yekutsiva yekucheka bonde yakagadzirwa yePrimiyamu mhando PVC, Adhesive tacky Kucheka mat ne 12 * 24 (inch)
Chengetedza chakavanzika chemufirimu pane aya Silhouette akauya kucheka bonde kana chitoro kuti urambe uchicheka bonde rinonamira risina marara uye guruva. Shandisa chinotsvaira kubvisa zvidimbu zvakawandisa uye spatula kunyatso bvisa mifananidzo yakatemwa.
Aya maMats anongova nemwero wakaringana wekubata kuti ubate zvinhu zvako zvine simba munzvimbo uye zvinotendera kubviswa kuri nyore kwezvinhu. Kucheka mat kwakanakira ma crafters, quilters, art vadzidzi uye hobbyists kuita akawanda DIY Projects.
Item Model Nhamba 8824
Chigadzirwa Zviyero 325x640 mm
Dzakakodzera Machine Silhouette Cameo4 / 3/2/1
Pashure: Kucheka Mat kune Silhouette, 8812, 12 ″ x12 ″ kucheka bonde reSilhouette cameo
Zvadaro: Kucheka Mat kune Silhouette, 8824, 12 ″ x24 ″ kucheka bonde reSilhouette cameo
3 akaturikidzana A5 Kucheka Mat, 883A5, Self kurapa Cu ...